Kitra any Frantsa : mety hanazatra ny PSG i Antonio Conte | NewsMada
Kitra any Frantsa : mety hanazatra ny PSG i Antonio Conte
Mbola ambentin-dresaky ny Frantsay, indrindra fa ny Parizianina, ny nihintsanan’ny PSG teo amin’ny ampahavalon-dalana, hiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”, taranja baolina kitra farany teo. Ankehitriny, eo am-pieritreretana ny hanolo mpanazatra ny tomponandraikitry ny PSG. Ho tapitra amin’ny volana jona rahateo ny fifanarahan’ny ekipa amin’ilay Espaniola, Unay Emery. Ity farany izay voaenjika mafy fa antony nampitotongana ny Paris St Germain.
Amin’ity herinandro ity, hisy fihaonan’ny mpitantana ny PSG amin’ny ekipa teknikan’ilay Italianina, Antonio Conte, hidinika amin’ny hitondrany ity ekipan’i Paris ity. I Antonio Conte izay toa mangatsiatsiaka amin’ny mpitantana ny Chelsea, ekipa tantanany, amin’izao fotoana izao.
I Chelsea, izay mbola hifandona amin’ny FC Barcelone, eo amin’ny lalao ampahavalon-dalana miverina amin’ny fiadiana ny ho tompondakan’i Eoropa “Ligue des champions”. Fihaonana, hotanterahina any Camp Nou, rahampitso alarobia.
Tsiahivina fa efa nitondra ny Squadra Azzura, ekipam-pirenen’i Italia, nanomboka ny volana aogositra 2014 ka hatramin’ny jolay 2016 ny tenany. Tonga teo amin’ny lalao ampahefa-dalana, tamin’ny “Euro 2016” ny Italianina, tamin’izany.